Namoota Qarqaarsi Isaan barbaachisuuf qaqqabuu akka qabnu qulqulluu Paatriyaarikiin Abbaan keenya Maatiyaas 1ffaan yaadachiisan – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Namoota Qarqaarsi Isaan barbaachisuuf qaqqabuu akka qabnu qulqulluu Paatriyaarikiin Abbaan keenya Maatiyaas 1ffaan yaadachiisan
January 6, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Namoota Qarqaarsi Isaan barbaachisuuf qaqqabuu akka qabnu qulqulluu Paatriyaarikiin Abbaan keenya Maatiyaas 1ffaan yaadachiisan!
Ayyaanni dhaloota Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan gammachuu, nageenyaa, tokkummaa, bilisummaa fi walqixxummaa ta’uu akka qabu Paatriyaarikii Abbaankeenya Maatiyaas 1ffaan ibsa mudde 26 bara 2008 kennaniin beeksisan.
Abbaan keenya ibsa kennan kana irratti “Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos addunyaa kana irra deddeebi’ee dhala namaa yeroo du’a irraa fayyisu eenyuunuu osoo hin miidhiin daandii nageenyaa irra deddeebi’uudhaani; jibbii fi of jaalachuun yeroo nama miidhu malee yeroo yerooo fayyadu; yeroo nama balleessu malee yeroo nama guddisu ( misoomsu) kutaa addunyaa kam irrattuu argamees dhagahamees hin beekamu seenaadhaanis galmaa’ee hin jiru” jedhaniiru.
Eebbifamoon abbaan keenya kun ibsa isaanii kana irratti biyyi keenya Itiyoophiyaan yeroo ammaa kana daandii guddinaa qabattee deemaa akka jirtuu fi kun immoo abdii boruu akka mul’isu ibsanii abdiin Waaqayyo irratti qabnu kanas Waaqayyo nuuf eebbisee Amantaan, qomoon, afaaniin, bifaan osoo addaan wal hin qoodiin uummanni Itiyoophiyaa marti keenyi tokko taanee waan hojjenneef bu’aa tokkummaa keenyaati jedhaniiru. Dabalataanis bu’aan misoomaa kun guddachaa akka deemu malee akka duubatti deebi’u uummanni keenya Eeyyamuu hin qabu jedhaniiru.
Dhuma irrattis bara kana keessa biyya keenya keessatti hir’ina roobaatiin uummatani hanqinni nyaataa isaan muudate harka firoottan isaanii eegaa jiruutii nutis Gooftaan keenya Jaalalaan nu barbaachuu dhufuu Isaa fakkeenya taassifannee gara isaanii deemuudhaan isiniii jirra jennee qarqaaruu qabna jedhaniiru. Kennaan nuti isaaniif kenninu xiqqoodha; baay’eedha osoo hin jedhiin atattamaan isaanii qaqqabnee Waaqayyo hunda keenya akkuma jaalate nutis waljaalchuu qabna jedhaniiru.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-01-06 08:47:572018-10-26 09:21:15Namoota Qarqaarsi Isaan barbaachisuuf qaqqabuu akka qabnu qulqulluu Paatriyaarikiin Abbaan keenya Maatiyaas 1ffaan yaadachiisan
Sagantaa TV 10/04/2008 Duurbeen Uumaa ishee Deesse